Ragga barta-G | Ragga Stylish
Barta G ninka dhexdiisa way ka jirtaa iyo inta aan ku ogaano, sidoo kale waxaa loo yaqaan dhibic R ama P si aan loogu khaldin gabadha barkeeda. Ma rabtaa inaad ogaato halka ay ku taallo? Dad badan oo xiiso leh, wararka ku saabsan meesha uu ku sugan yahay maahan kuwo aad u wanaagsan, maxaa yeelay waxay ku dhex jirtaa malawadka aadanaha.
Soo hel dhibic P Rag badan waxay u noqon kartaa mowduuc la iska indho tiri karo, goobta ay ku taalo darteed, iyo kuwa kale mowduuca ayaa iska dhaafa cuqdada qaarkood waxayna aad u daneynayaan inay ogaadaan iskuna dayaan khibraddan cajiibka ah.
1 Xagee buu ku yaal barta G?
2 Sidee loo kiciyaa ragga G-kaalinta?
3 Galmada afka iyo saliidaha kahor intaadan gaarin barta-G
4 Isticmaalka qalabka galmada
Xagee buu ku yaal barta G?
Ragga-G-kaalinta Waa qanjirka 'prostate' oo ku yaal qiyaastii 5-7 sentimitir futada, oo u dhow xubinta taranka ragga. Waa xubin buroole ah cabbirka walnut ka kooban waxyaabo badan oo neerfaha dhammaada, oo sidaas darteedna waa aag aad u xasaasi ah oo xaasaasi ah.
Si aad u awoodo inaad taabato waa inaad fartaada si taxadar leh u geli futada oo laga gaadho malawadka. Markaad gudaha gasho, dhowr sentimitir qoto dheer, baaxad waa in la dareemaa taas oo u istaagi doonta cabirka hal sentimitir, waxay noqon doontaa qanjirka 'prostate' Qeybtaan waxay ku taal inta u dhexeysa aagga kala guska iyo dabada, wax yar ka hooseeya kaadi haysta iyo hareeraha kaadi mareenka.
Sidee loo kiciyaa ragga G-kaalinta?
Waa in la caddeeyaa in isku dayga lagu kicinayo aaggan uusan la xiriirin kaliya galmada khaniisnimada. Dhaqanka noocan ah waa in la ixtiraamo, sida kaqeybgalka ciyaar kacsi iyo galmo taasi waxay si cad ugu saleysnaan kartaa labada nin ee isku jinsiga ah, khaniisiinta ama lammaanaha keligood ah, laakiin had iyo jeer iyada oo ujeedadu tahay in la kiciyo aagga oo ah nooc ka mid ah masturbalka
Waa dhaqan sii baahaya oo marba marka ka sii dambeysa sii fidaya taasna waa loo qaadan karaa wuu ka fogaanayaa tabta waqtiyo kale. Arrinta ku saabsan kicinta waxay shaki ku abuuri kartaa lamaanaha, maadaama ay diidi karaan inay baaraan aagga cabsi ay ka qabaan xanuun ama in aagga aan si wanaagsan loo saliidayn.
Marka hore waa inaad sameysid wadahadal halkaas oo kalsooni ay ka jirto heshiis. Xaqiiqda ah in haweeneydu isku daydo inay gasho kicinta waa xaalad gebi ahaanba caadi ah, halkaas oo aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin raganimada gabi ahaanba. Sidoo kale ma ahan in xaalada lagu qasbo maadaama go’aanka uu qaadan doono ninka waana in la ixtiraamo.
Galmada afka iyo saliidaha kahor intaadan gaarin barta-G
Hadaad rabto inaad kiciso lammaanahaaga kahor intaadan gaarin heerkaan waxaad ku bilaabi kartaa galmada afka, waa hab lagu bilaabo bilowga jimicsiga guud oo lagu dhiso kacsigaaga. Waad duugi kartaa qaybta perineum, oo ah aagga u dhexeeya futada iyo xiniinyaha, iyo aag aad u xiiso badan.
Tallaabadan ka dib waxaan bilaabi karnaa farta gelinta, Ugu horreyntii, waa inaan helnaa dabacsanaan dabacsan oo wax walbana la subkado si loo helo marin fiican. Fartaada gal oo Raadi aagga ay tahay inaad duugto, Waa in la xusuusnaado inay ku jirto qaabka walnut yar, oo leh xoogaa xoogaa jilicsan.
Duugista ayaa noqon doonta mid jilicsan, leh laxanka la midka ah marka haweeneyda G-kaalinta lagu duugo. Waa inaad raadisaa qaafiyado kala duwan ilaa aad ka heshid midka ugu xiisaha badan isaga.
Haddii aadan cidna u baahnayn oo aad rabto inaad keligaa sameyso, waa inaad ogaataa inaad adiguna sameyn karto. Haddii ay tahay markii kuugu horreysay waa inaad isku diyaari saliid helitaanka aagga, maadaama helitaanka ballaadhinta aagga ay dhaawici karto. Raadi booska, raaxayso oo si tartiib tartiib ah u samee adigoon seegin in badan oo jelly batrool ah. Haddii xanuunku xoogaa dhib yeesho, waxaa jira daawooyin suuxdin leh oo ka dhigi kara aagga hurdo yar.
Waa inaad qaadataa taada waqti si loo baadho aagga kuna bilaw duugista jilicsan. Duugista banaanka ee u dhaxeysa xiniinyaha iyo futada sidoo kale waa mid aad u xiiso badan. Waxaad ku dambayn doontaa soo bandhigida fartaada si aad u hesho bartaada e duug xawaaraha aad adigu iska leedahay.
Isticmaalka qalabka galmada
Waxaa jira qalab kala duwan oo loogu talagalay kor u qaado waayo-aragnimadan iyo kicinta barta G Ninka. Isticmaalkooda, laguma talin karo inaad u isticmaasho khibrada ugu horeysa laakiin halkii ay markii horeba aqoon u lahaayeen khibrada. Waan heli karnaa qalabka galmada sida qaybaha futada, kiciyaha futada ama duugista qanjirka 'prostate'.
Sida dib-u-soo-kabashada sahamintan iyo waayo-aragnimadan weyn, waa in la ogaadaa, sida kor lagu sharaxay, in qofku uusan ka baqayn inuu isku dayo inuu raadsado xiisaha sidan. Tani ma soo saareyso ama shardi ku tahay in nin beddel jihadaada galmada. Maaddaama ay tahay macluumaadka ugu dambeeya ee aan weli la sharraxin, xaqiiqda ah in la gaaro dhaqankan ayaa sababi doona in orgasms-yada ay ahayd inay ku sii bataan xoog ilaa toban jeer ka badan. Khibrad ay tahay in lagu dhaqmo shaki la’aan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Ragga-G-kaalinta
Platinum timo cad ragga